Sunday January 18, 2015 - 03:43:49 in Warar Af-Soomaali ah by Super Admin
Ururka isu taga Suxufiyiinta Soomaaliyeed ayaa Ra’isulwasaare Cumar Cabdirashiid uga digay inuu Wasiirka Cadaaladda u magacaabo Faarax Cabduqadir oo astaan u noqday Cadaalad daro iyo kaligii talisnimo.
Associated Somali Journalists ASOJ waxeey tibaaxday iney Xabsiga dhexe ee Muqdisho ku xiran yihiin ku dhawaad lix bilood Maxaabiis ka badan kun iyo afar boqol oo qof kuwaas oo aan 75% la horgeyn Maxkamad si loo xukumo.
“Maxaabiis ka badan Kun iyo afar boqol oo ay ka mid yihiin Laba Wariyeyaala madaxbanaan oo kala ah Mohamed Bashiir iyo Mohamud Carab ayaa ku xiran Xabsiga dhexe ee Muqdisho,habeenkii qaarkood istaaga ayaa waaga ugu baryo,waxeeyna naxdinta ugu weyn tahay iney iska xiran yihiin lix bilood iyo halsano iyagoon la xukumin ama Maxkamad la horgeyn”ayuu yiri Gudoomiyaha Asoj Dahir Alasow.
Dahir Alasow wuxuu sheegay in Masuuliyiin ka tirsan Ururka Suxufiyiinta ASOJ iyo Ururka haweenka Qaranka Soomaaliyeed Batuule Gabale booqdeen Xabsiga dhexe ee Muqdisho balse waxyaabahii ay ku soo arkeen ay yihiin Cadaalad daro,laaluush iyo tacadiyo ka baxsan Bini-aadamnimada.
“Ra’isulwasaare Cumar Cabdirashiid waxaan uga digeeynaa inuu Wasiirka Cadaaladda ku soo celiyo Faarax Cabduqadir,waxaan sidoo kale ugu baaqeeynaa inuu si degdega uga hoowlgalo Wariyeyaasha Xabsiga dhexe ku xiran 15 Augusto 2014 ilaa hada kuwaas oo aan Maxkamad la horgeyn” ayuu yiri Dahir Alasow.
Dahir Alasow wuxuu argagax iyo lama iloobaan ku tilmaamay in Haweeneey Soomaaliyeed ku dhex umushay Xabsiga dhexdiisa iyadoo cunugeediina ku saqiiray halka sidoo kale nin ka tirsan Maxaabiista hadalkii gebay sidii habeen walba loo garaacayay.
“Maxaabiista habeenkii ayaa dibadda loo saaraa,waxaa lagu fasaxaa rag dharcada oo Maxaabiista ka tirsan kuwaas oo inteey xir xiraan biyo ku rusheeyo,ilaa Maxbuuska uu miir beelo”ayuu yiri nin ka tirsan Wariyeyaal si qarsoodiya u booqday Xabsiga dhexe ee Muqdisho.
ASOJ Waxeey si weyn uga digeeysaa in qofka cadaalad darada heerkaan gaarsiisan geystay lagu abaalmariyo Wasiir ama loo magacaabo Wasiirka Cadaaladda.